मरिच बीउ माटो तापमान गर्दा बिरुवा अघि देखा, 13-15 डिग्री को एक तापमान मा अङ्कुराउन, उच्च। इष्टतम तापमान, 20-25 डिग्री मानिन्छ यसलाई शुट 12-15 दिन पछि देखिन्छन्। मरिच बिरुवा रोपण अघि, उहाँले एक बढ्दै लामो सिजन छ जान्नु आवश्यक, त्यसैले बीउ टमाटर भन्दा पहिले बिरुवा रोप्नुपर्छ छ। Greenhouses लागि र खुला जमिनमा मार्च को अन्त मा मध्य-फेब्रुअरी बिरुवा रोपण लागि इष्टतम समय।
चिस्यान राम्रो अवशोषित गर्नुपर्छ बिरुवा लागि तयार माटो, खनिज पदार्थ को पर्याप्त मात्रा त्यहाँ हुनुपर्छ। माटो, अम्लीय हुनुपर्छ यो रोगजनकों र किरा हुनु हुँदैन। माटो अनुपात मा मिश्रित गर्नुपर्छ: धरण2भागहरु, 1 भाग पीट, sawdust 0.5 भागहरु को पानी उम्लिरहेको संग उपचार। मरिच बिरुवा त माटो माटो मा लगाए गरिनेछ भने, यो 1 भाग बालुवा थप्न आवश्यक छ। पूर्व माटो पानी पानी बाल्टिन 1 Tbsp को अनुपात मा मिश्रित हुनुपर्छ जो रोपण गर्न पानी हाले सिफारिस गरियो। 1 घण्टा मा superphosphate को spoonful। spoonful पोटासियम सल्फेट को र यूरिया, काठ खरानी को आधा ग्लास।
बीउ धेरै भिजेको माटो छैन नम माटो मा लगाए गर्नुपर्छ अक्सिजन कमी हुनेछ। रोपेको, काठ खरानी को सतह छर्कियो वा pochvosmesi sifted। मरिच बिरुवा 40-50 दिनको लागि हुर्किसकेका। माटो तापमान दायरामा 24-25 डिग्री मा कायम गर्नुपर्छ अंकुरण सम्म, चिस्यान 80-90% हुनुपर्छ। अंकुरण पछि दिनमा राती 12-14 डिग्री र 16-18 डिग्री गर्न तापमान कम गर्न आवश्यक छ। यो जराको को राम्रो विकास लागि आवश्यक छ, बोट छैन पनि बाहिर आएको गरिनेछ। यो मरिच बिरुवा प्रकाश को कमी को डर छैन र रूपमा फिर्ता लिया गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ बिरुवा टमाटर। 3-5 दिन पछि, आवश्यक तापमान फेरि, बादल मौसममा 18-20 डिग्री गर्न, सूर्य 22-28 डिग्री छ, 15-18 डिग्री गर्न रात पर्याप्त तापमान मा वृद्धि गर्न।
जब बिरुवा मरिच बिरुवा देखा पहिलो साँचो पात swordplay गर्न थाल्छन्। तपाईं त्यो जराको को निष्ठा बाधा होसियार हुनुको, अप भयो जसमा नै गहिराई मा भूमि को एक गांठ संग डुबुल्की मार्न गर्न आवश्यक छ। यो पीट वा अन्य सामाग्री को माटो मा घुलनशील बर्तन मा डुबुल्की मार्न गर्नुपर्छ। बर्तन स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ: एक प्लास्टिक फिलिम मा लुढका एक ट्यूब 60 80 मिमी को एक व्यास र हात वा एक सिलाई मेशिन मा सिलना एक मुद्दा संग। त्यसपछि व्यास जस्तै आकार को व्यक्तिगत खण्डहरूमा को कट स्लिभ र समाप्त कप प्राप्त। जमीन मा रोपण र त्यसपछि जब बस polyethylene फिल्म पक्ष ब्लेड कटौती।
शीर्ष लाउने मल यसलाई विकसित रूपमा खाँचो मरिच को बिरुवा। धेरै पहिले रुचाउने कुनै पहिले दुई हप्ता भन्दा छानिने पछि ठाउँ लिनुपर्छ। रुचाउने लागि समाधान - पानी को 10 लिटर र superphosphate5G यूरिया 30 G। समाधान को खपत पारंपरिक सिंचाई मा जस्तै हुनुपर्छ। 3-4 दिन खुला जमीन मा रोपण दोस्रो रुचाउने सञ्चालन अघि: superphosphate को पानी 50 ग्राम 10 लिटर र पोटासियम नुन को 25 ग्राम (पोटासियम सल्फेट प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ)। राम्रो बिहान खुवाउन, त्यसपछि रोग विरुद्ध सुरक्षा गर्न रोपण हवादार। तुरुन्तै, र भविष्यमा उठाएर पछि प्रत्यक्ष सूर्यका देखि बिरुवा pritenyat गर्नुपर्छ। सूर्यका लागि, भविष्यमा निरन्तर वृद्धि गर्दा छोटो समयको लागि विकल्प गर्न: सूर्यका कार्य गर्नुपर्छ बिस्तारै लागि तयार हुनुहोस्।
यसलाई चाँडै बल प्राप्त ताकि यो नियमित "शो" बिरुवा सूर्य र खुला हावामा हावा उचित छ। बादल दिन सांझ मा र, यदि सम्भव भएसम्म, बिरुवा दीपक हाइलाइट गर्नुपर्छ डेलाइट यसलाई यसको विकास बढाउने र लामो दिन हल्का गर्न प्रयोग गर्न बिरुवाहरु सक्षम हुनेछ। पानी बारम्बार र प्रशस्त मात्रामा गर्नुपर्छ, तर गर्न जरा Rot छैन pereuvlazhnyat छैन। यो 20-25 सेमी र 10-12 साँचो पात को एक उचाइ छ जब खुला जमीन मरिच मा बिरुवा रोपण लागि तयार छ। यो 40-50 दिन को उमेर हुँदा सामान्यतया यो हुन्छ।
Lawns, lawns वर्गीकरण को प्रकार र प्रत्येक प्रजाति को विशेषताहरु। प्रकार टर्फ
व्यावहारिक सुझाव: एउटा ढुङ्गा देखि कागति कसरी बढ्न
नाम pinnate पात संग एशियाली ताडको रूख के हो? pinnate पात संग ट्रपिकल ताडको रूख: शीर्षक र विवरण
Buggies Jetem छुट्टी: वर्णन, लाभ र बेफाइदा
उपचार मा सहायक - Teraflex अग्रिम
"Espoli": प्रयोगको लागि निर्देशन। "Espoli": समीक्षा, मूल्य
सुझाव, जहाँ एक बच्चा संग आराम गर्न जान
म कसरी मान्छे ... एउटा प्रश्न वा निर्देशन प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रेम?
"Onitsuka बाघ" - दैनिक र खेल जूता जापानी गुणस्तर को embodiment
गर्भपातको खतरा: कारणहरू, लक्षणहरू, उपचार
नीलो केकडे: पालन गरेमा र प्रजनन, फोटो